आज १० बजे विप्लव समूहका प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने ! | जनदिशा
आज १० बजे विप्लव समूहका प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने !
काठमाडौँ, ७ भदौ । सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई आज १० बजे अदालतमा उपस्थित लागि आदेश दिएको छ ।
Previous Previous post: ‘यौनजन्य हिंसा विरुद्धको साझा अभियान’ घोषणा
Next Next post: नक्सालबाट मोटरसाइकलमा गोदावरी जंगल पुर्‍याएर १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार !